‘कारबाही हुनुपर्ने’ मन्त्री नै वार्ता टोलीमा परेपछि… जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
‘कारबाही हुनुपर्ने’ मन्त्री नै वार्ता टोलीमा परेपछि…
काठमाडौं । छ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीले कारबाही माग गरेका शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नै सदस्य नियुक्त गरेर शुक्रबार मन्त्रिपरिषद बैठकले वार्ता टोली गठन गरेको छ।
डा. केसीले यस्तो टोली गठन गर्नुलाई ‘आन्दोलनकै अपमानु बताउँदै वार्ता अस्वीकार गरेका छन् ।
‘सम्बन्धन दिलाउन लागिपरेका र हामीले कारबाही माग गरेका मन्त्रीलाई नै वार्ताटोलीमा राख्नु आन्दोलनकै अपमान हो’, डा. केसीले भने, ‘यो तीन करोड नेपाली जनताको पनि अपमान हो।’
अनशनको छैठौं दिन सरकारले डा. केसीसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको संयोजकत्वमा स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो ।
वार्ता टोलीका तीनै जना सदस्य शुक्रबार राति साढे १० बजेतिर डा. केसीलाई भेट्न अनशनस्थल टिचिङ अस्पताल पुगेका थिए ।
डा. केसीले मन्त्रीद्वयसँग औपचारिक कुराकानी गर्नै मानेनन् । सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न शिक्षामन्त्री यादव र अप्रत्यक्ष संलग्न स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीसँग उनले औपचारिक कुराकानी गर्न अस्वीकार गरे ।
‘मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईंहरूलाई अनादर गर्न खोजेको होइन, तर म तपाईंहरूसँग वार्ता गर्न सक्दिनँ’,डा। केसीले मन्त्रीद्वयलाई भनेका थिए, ‘हाम्रो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आउनुभएको हो भने ठिक छ, नभए वार्ता हुन सक्दैन।’
उनले आफ्ना माग राम्ररी पढ्नसमेत मन्त्रीद्वयलाई आग्रह गरे। ‘तपाईंहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पनि मेरो एउटा माग छ, कसरी वार्ता गर्नेरुु उनले भने । आजको नागरिकमा समाचार छ ।